Izodlalelwa eThekwini eyeChampions League yabesifazane
August 18, 2021 Impempe.com
Usihlalo weCosafa uTimothy Shongwe uthi uyibonga kakhulu iNingizimu Afrika ngokuhlale ivule izandla uma kukhulunywa ngokusingatha imiqhudelwano engaphansi kwale nhlangano.
Ukhuluma kanjena nje uShongwe bekwethulwa ngokusemthethweni iCAF Women’s Champions League ezodlalelwa eThekwini kusukela ngo-Agasti 26.
Akukapheli nasikhathi esingakanani kade kuneCosafa Cup yabesilisa, edlalelwe eGqebeha. Kulo mqhudelwano kugcine kuwine iBafana Bafana edlale kowamanqamu neSenegal.
“Abantu bahlale bebuza ukuthi kungani iNingizimu Afrika ihlale isingatha imiqhudelwano yeCosafa.
“Mina ngiyazi ukuthi izuza kangakanani i-Afrika eseNingizimu ngokuvumela phezulu uma kunomqhudelwano ozosingathwa,” kusho uShongwe.
“Ukube ibingavumi iNingizimu Afrika eminye yale miqhudelwano ibingeke idlalwe. Amanye amazwe lapho siphuma khona awanazo izinsiza ezifanele.
“Futhi awekho esimeni esikahle somnotho ukuthi angasingatha le miqhudelwano. INingizimu Afrika ngokusingatha le midlalo isiza kakhulu ukuthuthukisa ibhola e-Afrika eseNingizimu.”
Imidlalo yeWomen’s Champions League izodlalelwa eKing Zwelithini Stadium, eMlaza. Iqembu elizodla umhlanganiso kulo mqhudelwano yilona elizomela i-Afrika eseNingizimu kwiChampions League yabesimame, eCairo, e-Egypt.
“Empeleni nje iNingizimu Afrika ifana nobhuti omdala ngokusiza amanye amazwe ase-Afrika eseNingizimu, ngokuthi ngaso sonke isikhathi ivume ukuthi le midlalo idlale.
“Uma le miqhudelwano ingadlalwa kuchaza ukuthi inqubekela phambili ayikho ekuthuthukiseni amazwe ase-Afrika eseNingizimu,” kugcizelela uShongwe.
Inhloko yomnyango eMnyangweni wezeMidlalo ubuCiko namaSiko KwaZulu-Natal uThobile Sifunda, ithe bajabula kakhulu ngokuthi lesi sifundazwe sizosingatha le midlalo.
“Uhulumeni waKwaZulu-Natal oholwa ubaba uSihle Zikalala, uNdunankulu, nomama uHlengiwe Mavimbela, ongungqongqoshe wezeMidlalo, uyakuthakasela ukuba nale midlalo yize sibhekene nesimo esibi seCovid-19.
“Yinyanga yabantu besifazane lena ngakho kuhle kakhulu ukuthi bazobe bedlalela lapha. ITheku yisizinda senjabulo ngakho kuhle futhi ukuthi sizoba neBeach Soccer njengengxenye yesivumelwano,” kusho uSifunda.
FUNDA NALA: Bacishe ballona ibhola onompempe kanti belimnandi
Isivumelwano sithi imidlalo ethinta iCosafa izodlalelwa eNingizimu Afrika iminyaka emithathu, kuqala ngale yeChampions League.
IBeach Soccer izokuba ngo-Okthoba khona eThekwini. INingizimu Afrika izobe imelwe yiMamelodi Sundowns Ladies kulo mqhudelwano.
Amanye amaqembu yiLesotho Defence Ladies (Lesotho), Double Action Ladies (Botswana), Manzini Wanderers (eSwatini), Green Buffalos (Zambia), Black Rhinos Queens (Zimbabwe) neTURA Magic (Namibia).
Previous Previous post: Ibhola belimnandi, kodwa onompempe bafaka unyawo lwedada
Next Next post: ISafa ifuna kuqiniswe eyokuhlolelwa kwabadlali izidakamizwa